HomeChampions LeagueRonaldo Oo Taageero Weydiistay Dadka Portugal Ciyaarta Finalka Champions League
Cristiano Ronaldo ayaa ka rajeeyey dadka reer Portuqal inay si weyn u taageeri doonaan kooxdiisa Real Madrid, ciyaarta gunaanadka ee ka dhici doonta habeen dambe garoonka Estadio da Luz ee caasimada wadankiisa hooyo ee Lisbon, wakhti naadigiisu dagaal ugu jiro guusha Koobkii 10 aad ee Horyaalka Yurub ah.
‘Waxaan rajaynayaa in taageerayaasha Portuqiiska ahi dhamaantood is barbar taagi doonaan Real Madrid,’ ayuu yidhi Ronaldo.
‘Waxaan rajaynayaa inay wada noqon doonaan taageerayaal Madrid ah iyagoo ku taageeraya Aniga, Fabio Coentrao iyo Pepe daraadood. Kooxda taageerada badan uun baa guusha hantida, marka waxaan ka rajaynayaa inay nala safan doonaan.’
Taageerayaasha Portugal ayaan marna ilaabin, ilmadii 10 sanno ka hor ka qubanaysay Ronaldo isla garoonkan gudihiisa, markii gool uu ka dhaliyey ciyaaryahan Angelos Charisteas ay u horseeday xulkii qaranka Greece ee uu watay tababare Otto Rehhagel inay ku qaadaan1-0 koobka qaramada qaarada Yurub, taas oo ka hor istaagtayWiilkan iyo xulkiisa Portuqiiskaba guul xasuus reebta oo ay ciidooda hooyo ku gaadhi lahaayeen.
Laakiin ciyaarta habeendambe oo uu ku guulaysto isla garoonkii guuldaradu kaga dhacday , waxay u noqon doontaa sidii riyo oo kale.
‘Waxay noqon doontaa ciyaar khaas ah. Inaan ku dhex ciyaaro wadankayga Portugal. Final-kaygii ugu horeeyey ee aan Real Madrid la imaado Champions League. Aad baan ugu faraxsanahay, aad baan u riyaaqsanahay,’ ayuu Ronaldo yidhi.
‘Wuxuu noqon doonaa final si gaar ah u taaban doona garoonka Benfica. Waa garoon xusuus ku leh qof kasta oo Portaqiis ah iyo anigaba. Waa wadankaygii, taasna aad baan ugu faraxsanahay. Waxa laga yaabaa inay taageeri waayaan Real Madrid laakiin waa caadi taasi. Waxaan isku dayi doonaa inaan ugu raaxaysto sida ugu dhamayska tiran leh.
Xabi Alonso Oo Khudbad Qiiro Leh Ku Macasalaameeyey Reer Spain
Ancelotti Oo Hiil Xummad Jebin Ah U Noqday Guardiola